2022 ~ Htet Aung Kyaw
Interview with Dr Tun Myint. Part-2.
5:40 AM Htet Aung Kyaw No comments
“PDF, CDM, သပိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ဒီ ၃ ခုအပေါ် မူတည်နေပါတယ်”
(ဒေါက်တာထွန်းမြင့်- နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန ပါမောက္ခ- Carleton College)
(၂၆/ ၅/ ၂၀၂၂)
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှုဟာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ၊ အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM နဲ့ သပိတ်တိုက်ပွဲတွေဘယ်လောက်အထိ အရှိန်ကောင်း-မကောင်းဆိုတဲ့အချက်ပေါ် မူတည်နေတယ်လို့ Carleton College နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးတနှစ်ကြာပြီးချိန်မှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုအခြေအနေ၊ ပြည်တွင်း လှုပ်ရှားမှုအရှိန်အဟုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခုထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက် ဒုတိယ ပိုင်းမှာတော့....
- ထိုင်း-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ...
- တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ...
- တရုတ်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ မြန်မာ့အရေးပေါ် ချည်းကပ်မှုမှာ ဘယ်သူက ပိုလက်တွေ့ကျသလဲ...
- ၁၄ လကြာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအနေအထား ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်လာနိုင်သလဲ...
စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(အင်တာဗျူးများ ကြည့်ပြီးပါက ဤ youtube ချန်နယ်ကို Subscribe လုပ်ပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်။)
Interview with Dr Tun Myint. P-.
5:00 AM Htet Aung Kyaw No comments
“အမေရိကန်ရဲ့ အားပေးမှုဟာ မူဝါဒကနေ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်လာတာဖြစ်တယ်”
(၂၅/ ၅/ ၂၀၂၂)
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကို ဝါရှင်တန်အထိ ဖိတ်ခေါ် တွေ့ဆုံခြင်းဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကျင့်သုံးနေတဲ့ “မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအားပေးမှု'' မူဝါဒပိုင်းကနေ လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖေါ်တဲ့အဆင့်ဆီ ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ Carleton College နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ထွန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးတနှစ်ကြာပြီးချိန် အမေရိကန်အပါဝင် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အားေ့ပးမှူဟာ “နှုတ်၏စောင်မခြင်း” အဆင့်မှာ ရှိနေဆဲလား၊ တကယ်လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်မယ့် အလားအလာရှိပါရဲ့လားဆိုပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခုထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက် ပထမ ပိုင်းမှာတော့....
- NUG ဝန်ကြီးတွေကို ဝါရှင်တန်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ဗာယ်က ဘာလဲ...
- အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အချို့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် နားလည်လာပြီလား...
- အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ သြစတေလျ၊ အိန္ဒိယ ၄ နိုင်ငံတွေ့ဆုံပွဲရဲ့ ကြေညာချက်တွေက တကယ်အလုပ်ဖြစ်မှာလား...
- CDM တပ်မတော်သားတွေကို သြစတေလျက ဗီဇာ ထုတ်ပေးခြင်းဟာ တကယ်အလုပ်ဖြစ်နိုင်သလား...
(အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတို့နဲ့ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေဆွေးနွေးချက်ကိုတော့ မနက်ဖန် ညပိုင်းမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Thein Oo of NUG on Justice. P-2
4:32 AM Htet Aung Kyaw No comments
“အားလုံးညီညီ တပြိုင်တည်းတွန်းနိုင်ရင် မိုးမကုန်ခင်မှာတောင် အပြောင်းအလဲတွေ မြင်လာရနိုင်ပါတယ်”
(ဦးသိန်းဦး- ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး- တရားရေးဝန်ကြီးဌာန- NUG)
ပြည်တွင်းတိုက်ပွဲမှာ နယ်မြေ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးနေရတာ၊ ပြည်ပ သံတမန်ရေးတိုက်ပွဲမှာ အထိနာနေတဲ့ စစ်ကောင်စီကို အင်အားစုအားလုံးက တပြိုင်တည်း တိုက်မယ်ဆိုရင် မိုးမကုန်ခင်တောင် သိသာတဲ့အပြောင်းအလဲတွေ မြင်လာရနိုင်တယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တရားရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဦး ကပြောပါတယ်။
တော်လှန်စစ် တနှစ်တာကအတွင်း စစ်ရေးတိုက်ပွဲ၊ သံတမန်ရေးတိုက်ပွဲ၊ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုအခြေအနေပေါ် BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခု ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက် ဒုတိယ ပိုင်းမှာတော့...
- သံတမန်ရေးတိုက်ပွဲမှာ NUG က အသာစီး ရလာနေပြီလား...
- CDM တပ်မတော်သားတွေ၊ ရဲတပ်သားတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်လောက်အထိ များလာနေသလဲ...
- ၂၀၂၃ မတိုင်ခင် သိသာတဲ့အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလား...
Interview with Their Oo of NUG on Justice. P-1.
4:07 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စစ်ကိုင်းတိုင်းက ၁၅ မြို့နယ်မှာ တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ စတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”
စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ မကွေးတိုင်းမှာ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကို ပြည့်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးချပြီးတဲ့နောက် အခု ဒုတိယ အဆင့်အဖြစ် မြို့နယ် ၁၅ ခုမှာ တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တရားရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဦး ကပြောပါတယ်။
တော်လှန်စစ် တနှစ်တာကအတွင်း နိုင်ငံရဲ့ ၅၀% နီးပါးကို တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီ၊ မြိုန့ယ် ၃၀ ကျော်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးချပြီး ၁၅ မြို့နယ်မှာ တရားစီးရင် ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခု ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက် ပထမ ပိုင်းမှာတော့...
- ၁၅ မြို့နယ်မှာ ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့ တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့တွေက ဘယ်လိုတာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်မလဲ...
- တရားစီရင်ရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာနတွေ ရှိနေပြီလား...
- တိုင်းပြည်ရဲ့ ၄၅% ကျော် နယ်မြေကို ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လို သက်သေပြနိုင်မလဲ...
(ပြည်တွင်းမှာ နယ်မြေ ထိန်းချုပ်မှုတိုးလာတာအပြင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကော ဘယ်လောက်အထိတိုးလာနေသလဲ...ဆွေးနွေးချက်ပါတဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)
Interview with Mar wi of KNDF. P-2.
6:35 AM Htet Aung Kyaw No comments
“ကရင်နီမှာ စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေး ၉၀ % လောက် မလည်ပတ်နိုင်တော့ပါဘူး”
(မာဝီ - အတွင်းရေးမှူး ၂ - KNDF)
(၁၈ / ၅/၂၀၂၂)
ကရင်နီဒေသမှာ စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တယား ၉၀% ခန့်ပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပြီး တနိုင်ငံလုံးမှာ စစ်တပ်က လုံး၀ အုပ်ချုပ်ခွင့်မရအောင် ပြည်သူတိုင်းက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (KNDF) အတွင်းရေးမှူး ၂ မာဝီ က ပြောပါတယ်။
ခုခံတော်လှန်စစ် တနှစ်တာကာလအတွင်း ကရင်နီဒေသက တိုက်ပွဲအခြေအနေ၊ ရှေ့အလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- စစ်တပ်က ရွာမီးရှို့မှုတွေ ဆက်လုပ်နေဆဲလား...
- လူငယ်တွေအများကြီး ဘာကြောင့် တော်လှန်ရေးထဲပါဝင်လာသလဲ...
- တနှစ်တာအတွင်း ဘယ်လောက်ခရီးရောက်နေပြီလဲ...
- NUG, NUCC အပေါ် ဒေသခံအဖွဲ့တွေက ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ...
- လူငယ်တွေ တော်လှန်ရေးသတိ၊ စစ်ရေးသတိရှိဖို့ ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ...
Interview with Mar Wi of KNDF. part-1.
2:31 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စိတ်ဓာတ်ပိုင်းရော၊ တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မှာပါ သူတို့ဖက်က ကျနော်တို့ကို ယှဉ်လို့မရတော့ပါဘူး”
(မာဝီ- အတွင်းရေးမှူး ၂- KNDF)
(၁၇ / ၅/၂၀၂၂)
ထိခိုက်ကျဆုံးမှူများလာနေတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ လေကြောင်းအကူသာမပါဘူးဆိုရင် တော်လှန်ရေးတပ်တွေကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် မတိုက်ရဲတော့ဘူးလို့ ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်မတော်-KNDF အတွင်းရေးမှူး ၂- မာဝီ ကပြောပါတယ်။
ခုခံတော်လှန်စစ် တနှစ်တာကာလအတွင်း ကရင်နီဒေသက တိုက်ပွဲအခြေအနေ၊ စစ်ကောင်စီဖက်က ထိခိုက်ကျဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- ကရင်နီဒေသက တိုက်ပွဲများရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ...
- စစ်ကောင်စီဖက်က အထိနာတဲ့ တိုက်ပွဲများ...
- KA, KNDF, PDF တွေ ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသလဲ...
- လွတ်မြောက်နယ်မြေ ဘယ်လောက်များများကို တော်လှန်ရေးတပ်တွေက ထိန်းချုပ် ထားနိုင်ပြီလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(သိသာတဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်လာအောင် တော်လှန်စစ်ကို ဘယ်လိုအရှိန်မြှင့်သင့်သလဲ- အကြောင်းပါဝင်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
(အင်တာဗျုးများကြည့်ပြီးပါက ဒီ youtube ချာနယ်ကို Subscribe လုပ်ပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်)။
Interview with Salai Yaw Mann of CDF-Mindat. part 2.
5:02 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စကစ က ပြိုကျနေပြီ၊ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဆက်တွန်းနေဖို့ပဲလိုပါတယ်”
(ဆလိုင်းယောမာန်- မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်)
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာ နိုင်ငံရေးဖက်မှာရော၊ စစ်ရေးဖက်မှာပါ အရေးနိမ့်လာပြီး ပြိုကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖက် အခုရှိန်အတိုင်း ဆက်တွန်း သွားဖို့သာလိုတော့တယ်လို့ မင်းတပ်မြို့နယ် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဆလိုင်းယောမန်ကပြောပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး တနှစ်တာကာလအတွင်း တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုအခြေအနေပေါ် BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြား ခဲ့တာပါ။
- မင်းတပ်မြို့နယ်မှာ စာသင်ကျောင်း ဘယ်လောက်များများပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ပြီလဲ...
- အခြားမြို့နယ်တွေမှာကော မင်းတပ်လို ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး ချထားနိုင်ပြီလား...
- မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာငွေ ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိသလဲ...
- လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး တနှစ်တာအတွင်း ဘယ်လောက်အထိ ခရီးရောက်နေပြီလဲ... စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Salai Yaw Mann of CDF-Mindat. part 1
3:25 AM Htet Aung Kyaw No comments
“သူတို့မှာပါလာတဲ့ သံချပ်ကာကားတွေက ဒီလိုတောင်ပေါ်တိုက်ပွဲမှာ အသုံးမဝင်ဘူး”
(ဆလိုင်းယောမာန်- မင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်)
မင်းတပ်-မတူပီ တောင်ပေါ်လမ်းမှာ စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ဒေသခံ မင်းတပ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် CDF-Mindat တွေ သီတင်းတပတ်ကြာတိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်နေပြီး စစ်ကောင်စီဖက်က အကျအဆုံးအ တော်များနေတယ်လို့ မင်းတပ်မြို့နယ် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဆလိုင်းယောမန်ကပြောပါတယ်။
တောင်ပေါ်ကားလမ်းမှာ ရာနဲ့ချီသွားနေတဲ့ စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းကို ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်နေသလဲ၊ တနှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာ မင်းတပ်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြား ခဲ့တာပါ။
- လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး တနှစ်ပြည့် အခမ်းအနားအခြေအနေ...
- စစ်ကောင်စီထံကရတဲ့ လက်နက်တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီကို ပြန်တိုက်နေတာလား...
- စစ်ကောင်စီရဲ့ သံချပ်ကာကားတွေက တောင်ပေါ်စစ်ဆင်ရေးမှာ ဘာကြောင့် အသုံးမတည့်တာလဲ...
- မင်းတပ်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ ၂၀၀ နီးပါးစလုံးကို CDF-Mindat က ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလား...
- တနှစ်တာ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်း ဘာတွေဆောင်ရွက်ပေးနေသလဲ... စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(မူလတန်းကျောင်း ၂၀၀ နီးပါးပြန်ဖွင့်ပြီး စာသင်ပေးနေမှုအပါဝင် ပြည့်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှူတွေအကြောင်းပါတဲ့ အပိုင်း ၂ ကိုတော့ စနေညမှာ ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Saw Taw Ni of KNU. part 2
6:15 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စစ်ကောင်စီက ခံစစ်၊ ကျနော်တို့က ထိုးစစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် စပြောတုန်းက အချို့က မယုံကြဘူး”
(ပဒိုစောတောနီး- KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်)
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တနှစ်တာကာလအတွင်း EAO တွေနဲ့ PDF လူငယ်တွေကြားမှာ နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကို အဓိကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ၂၀၂၂ အတွင်းမှာတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေက စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို ပြန်တိုက်နိုင်လာပြီး အခုဆိုရင် စစ်ကောင်စီက ခံစစ်၊ နွေဦးတော်လှန်ရေးတပ်တွေက ထိုးစစ်တောင်ဖြစ်လာနေပြီလို့ KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပဒိုစောတောနီးက ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အပေါ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အတော်များများက ငြင်းပယ်ပြီးနောက် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- KNU-PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြား တိုက်ပွဲအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲ...
- လွတ်မြောက်နယ်မြေနဲ့ ပြည့်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးချနိုင်မှုဒေသ ဘယ်လောက်အထိ တိုးလာနေပြီလဲ...
- PDF တွေအတွက် လက်နက်လိုအပ်ချက်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေနေရသလဲ...
- စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို EAO အများစုက ငြင်းပယ်ခြင်းက နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာနိုင်သလဲ...
- ၂၀၂၂ မကုန်ခင်မှာ တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့ ထိုးစစ်က ဘယ်လောက်အထိ အရှိန်မြင့်လာနိုင်သလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Saw Taw Ni of KNU. Part-1.
6:02 AM Htet Aung Kyaw No comments
“တရားမဝင်တဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး”
တရားမဝင်တဲ့ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဆွေးနွေးရေး ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်မခံနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပဒိုစောတောနီး ကပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အပေါ် ဒီနေ့- မေလ ၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားအကြောင်းပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ် KNU က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ခဲ့သလဲဆိုပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို KNU က ဘာကြောင့် ငြင်းပယ်တာလဲ....
- KNU က လိုချင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲပုံစံက ဘယ်လိုမျိုးလဲ...
- စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို လက်မခံတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအားလုံး NUCC မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်ခြေရှိသလား...
- EAO တွေနဲ့ PDF တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဘယ်လောက်အထိ အားကောင်းလာနေပြီလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(တော်လှန်ရေးတပ်တွေဖက်က ထိုးစစ်ဖြစ်လာပြီး “စစ်ကောင်စီဖက်က ခံစစ်ဖြစ်သွားပြီ” ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးချက်ပါဝင်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Dr Kyi Soe Tun of Saw-gov. Part-2
4:19 AM Htet Aung Kyaw No comments
“ကျနော်တို့ကချည်းပဲ ကြောက်ရတဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့ဘူး၊ သူတို့ကလည်း ကျနော်တို့ကို ပြန်ကြေက်ရတဲ့အနေအထား ဖြစ်သွားပြီ”
(ဒေါက်တာကြည်စိုးထွန်း- ဆောမြို့နယ် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်)
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းကာစ ကာလမှာ ပြည်သူတရပ်လုံးက စစ်တပ်ကိုကြောက်နေရပေမယ့် အခု နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်ကျော်ကြာလာချိန်မှာတော့ စစ်တပ်က PDF တပ်တွေကို ပြန်ကြောက်နေရတဲ့အနေအထားအထိ တော်လှန်ရေးအရှိန်တိုးတက်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ မကွေးတိုင်း ဆောမြို့နယ် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာကြည်စိုးထွန်းကပြောပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ တနှစ်ပြည့်အစီရင်ခံစာပါ ပြည့်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးချထားတဲ့ မြိုနယ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ထဲမှာ တမြို့နယ်ပါဝင်တဲ့ ဆောမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးအခြေအနေကို BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- မကွေးတိုင်း ယောနယ်တခုလုံးကို ကြားကာလ-အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေက အုပ်ချုပ်နေပြီလား...
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကို NUG အစိုးရက ဘာတွေ ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေသလဲ...
- ပြည့်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက် အဓိက စိန်ခေါ်ချက်က ဘာလဲ...
- တော်လှန်ရေးတနှစ်တာအတွင်း ကျေးလက်ဒေသမှာ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သလဲ....
- ဒေသခံ PDF တပ်တွေနဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေ ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသလဲ... စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Col Naw Bu of KIO/KIA on MAL's invitation.
6:07 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အပေါ် KIO/KIA ရဲ့ သဘောထား မေးမြန်းချက်” ------------------------------------------------------------------- (၅/၅/၂၀၂၂) စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာ တနိုင်ငံလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသာနာတွေကို နိုင်ငံရေးနည်းအရဆွေးနွေးအဖြေရှာတာမဟုတ်တဲ့အပြင် ပါဝင်ထိုက် ပါဝင်သင့်သူတွေ မပါတဲ့အတွက် ဒီဆွေးနွေးပွဲကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ KIO/KIA ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက စစ်ကောင်စီဥက္ကဌကိုယ်တိုင် စစ်တပ်ပိုင် ရုပ်-သံကနေ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့အပေါ် ဒီနေ့ KIO/KIA က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ အခု ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက် ထဲမှာတော့... - စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို KIO/KIA က ဘာကြောင့် လက်မခံနိုင်တာလဲ... - ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူတွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲ... - KIO/KIA နဲ့ PDF တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ ပူးတွဲ တိုက်ပွဲဖေါ်နိုင်မှုက ဘယ်လိုရှိသလဲ... - လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတနှစ်တာအတွင်း ဘယ်လောက်အထိ တိုးတက်လာသလဲ... - တော်လှန်ရေးမှာ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲ... စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ (အင်တာဗျုးများကြည့်ပြီးပါက ဒီ youtube ချာနယ်ကို Subscribe လုပ်ပါရန် တိုက်တွန်းပါသည်)။
Interview with Dr Kyi Soe Tun of Saw-Gov. Part 1
6:06 AM Htet Aung Kyaw No comments
မကွေးတိုင်း ဆောမြို့နယ် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှင့် မေးမြန်းချက် (၁)
စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေ PDF တပ် အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရောက်လာနေတဲ့ ဒေသတွေမှာ အဓိကအားဖြင့် တရားစီရင်ရေး၊ စစ်ဘေးကူညီရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ မကွေးတိုင်း ဆောမြို့နယ် ပြည့်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာကြည်စိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တနှစ်ပြည့်အစီရင်ခံစာမှာဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ မြိုနယ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်မှာ ကြားကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးချပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကို သိနိုင်ဖို့အတွက် အဲဒီမြို့နယ် ၃၀ ထဲမှာပါတဲ့ မကွေးတိုင်း ဆောမြို့နယ်ရဲ့ အခြေအနေကို BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- ဆောမြို့နယ်မှာ ကျေးရွာဘယ်လောက်များများကို PDF တပ်တွေက ထိန်းချုပ်ထားသလဲ...
- ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သလဲ...
- ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ ကျေးလက်နေပြည်သူတွေ ဘယ်လိုဆက်စပ်ဆောင်ရွက်နေသလဲ...
- စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေကျဉ်းလာပြီး ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ ပိုကျယ်လာအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေသလဲ... စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(အရင်ကတော့ စစ်တပ်ကို PDF ကကြောက်နေရတယ်။ အခုတော့ စစ်တပ်က PDF ကို ပြန်ကြောက်နေရတဲ့အခြေအနေထိ တော်လှန်ရေးအင်အားတိုးတက်လာနေပုံအကြောင်း ပါတဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖြန်ညမှာ ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
12:32 AM Htet Aung Kyaw No comments
ဒီစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေစဉ်တုန်းကတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆိုတာမလိုအပ်တော့ဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ နီးပါးကြာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်းကနေ ထွက်ပေါက်ရသွားပြီ။ အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းသစ်ပေါ်နေပြီ။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အချို့လုပ်ပြခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါလီမန်ထဲရောက်သွားပြီ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်နေကြချိန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေနွေးမှုတွေ၊ ပြည်ပရောက် တောခို ကျောင်းသားတွေ အိမ်ပြန်ခွင့်ရနေချိန်ပေါ့...
ဒီတော့...သမိုင်းထဲမှာ ချန်ထားခဲ့ရတော့မယ့် တောတွင်းဘဝဖြတ်သန်းမှုကို နှောင်းလူတွေ လေ့လာဖို့အတွက် မှတ်တမ်း တခုအဖြစ် ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားတဲ့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်တကြိမ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့... မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ သမိုင်းတပတ် ပြန်လည်ပြန်ပေါ့...။
လက်နက်ကိုင်အနိုင်ကျင့်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှ ရမယ်ဆိုတဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေ ပေါ်လာပြန်ပေါ့...။ ဒီလိုဖြစ်လာချိန်မှာ တောတွင်းဘဝဖြတ်သန်းမယ့်လူငယ်တွေအတွက် ဒီမှတ်တမ်းစာအုပ်ငယ်က တစုံတရာ အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီတကြိမ် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးက အရင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသမျှ တော်လှန်ရေးတွေထဲမှာ အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ နည်းနာအစုံဆုံးလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ လူထုထောက်ခံမှု၊ နိုင်ငံတကာအားပေးမှုကလည်း အရင် ဘယ်တုန်းကနဲ့မှ မတူအောင် အားကောင်းလှပါတယ်။
အခု တနှစ်တာကြာပြီးချိန်အထိ မြို့ပြနဲ့ ကျေးလက်မှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဆက်ရှိနေဆဲ၊ PDF တပ်တွေက မြို့နယ်ပေါင်း ၃၀၀ နီးပါးက ကျေးရွာတိုင်းလိုလိုမှာ လှု့်ရှား တိုက်ပွဲဝင်နေပြီ၊ နယ်စပ်ဒေသရှိ EAO တွေကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီ၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေကလည်း ရှိသမျှ အားကုန် အလှူငွေ ထည့်နေကြပြီဆိုတော့... အခုအခြေအနေဟာ စာရေးသူတို့ပါခဲ့ဖူးတဲ့ ၈၈ ကာလ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးထက် အများကြီး အားပိုကောင်းပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အဆုံးသတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် အခု တော်လှန်ရေးဟာ အားအကောင်းဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တာမို့ တော်လှန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့အတွက် အားလုံး လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
4:37 AM Htet Aung Kyaw No comments
ခွန်ထွန်းဦးနဲ့ စတင်စကားပြောဖူးတာ (တယ်လီဖုန်းနဲ့) ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကာလကလည်း အခုလိုပဲ (အရင်က CRPP အခု CRPH ပေါ့) ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို စစ်ကောင်စီက အသိအမှတ်မပြုလို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ စုပေါင်းပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မီတီ ဖွဲ့ထားချိန်ပေါ့...။
အဲဒီကာလက အခုလို ဆိုရှယ်မီဒီယာမရှိသေး၊ လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်းမရှိသေး ဘူးဆိုတော့ တယ်လီဖုန်းပဲ အားကိုးရတာ။ တယ်လီဖုန်းရှိတဲ့ အိမ်ကလည်း ဘယ်လောက်မှ များတာမဟုတ်။ အဲဒီ မများတဲ့ဖုန်းထဲမှာမှ နိုင်ငံခြားကနေ ခေါ်လို့ရတဲ့ဖုန်းက အတော်နည်း၊ အဲဒီလိုနည်းတဲ့အထဲမှာမှ ပြည်ပမီဒီယာကို ပြန်ဖြေရဲတဲ့ ဖုန်းက တဒါဇင်တောင် မပြည့်ဘူးထင်ပါတယ်။
ကျနော် မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် အဲဒီကာလ ကျနော်တို့ နော်ဝေး DVB ရေဒီယို ကို ပထမ ဆုံးအင်တာဗျုးပေးသူဟာ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး သခင်သိန်းဖေပါ။ နဝတ-နအဖ ခေတ် စစ်ထောက်လှမ်းရေး သိပ်သြဇာကြီးနေချိန်မှာ ပြည်ပ မီဒီယာကနေ စစ်ကောင်စီကို ဝေဖန်ဖို့ဆိုတာ တကယ့်စွန့်စားခန်းတခု...။
CRPP ဆိုတာ အခု CRPH လိုပဲ မဲအများစုအနိုင်ရထားတဲ့ NLD ပါတီနဲ့ SNLD အပါဝင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာ။ အဲဒီ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ ကျနော်တို့ကို အင်တာဗျုးပေးရဲတာက ခွန်ထွန်းဦးပါပဲ။ (အခြား အင်တာဗျုးပေးတဲ့ CRPP ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ... နိုင်ငွေသိန်း၊ ဦးထောင်ကိုထန်၊ ဦးကျင်ရှင်းထန်၊ ဦးအေးသာအောင်...စသဖြင့်)
သူက ရှမ်း တိုင်းရင်းသားဆိုပေမယ့် ရှမ်းတခုတည်းကို ကြည့်တာမဟုတ်။ တနိုင်ငံလုံးကိုကြည့်သူဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို နားလည်သူဖြစ်တယ်။ မီဒီယာ၊ သံတမန်၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး စသဖြင့် အတော်လေ့လာထားပုံရတယ်။ မေးခွန်း ဟ လိုက်တာနဲ့ ဒီသတင်းထောက် ဘာလိုချင်လို့ မေးနေတာလည်းဆိုတာ တန်းသိတယ်။
ဒါကတော့ တရားဝင်ပြောလို့ရတယ်။ ဒါကတော့ အလွတ်သဘောပြောတာဖြစ်တယ်...စသဖြင့် အတော်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူပါ။ CRPP ကိစ္စအပြင် ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် ရာဇာလေ ခရီးစဉ်တို့၊ ပီညဲရိုးခရီးစဉ်တို့ စသဖြင့် အတော်များများကို သူ့ဆီပဲမေးရတာပါ။
ဒီလို မီဒီယာကိစ္စ၊ သံတမန်ကိစ္စတွေကို ဒီလောက်နားလည်နေသူ။ ဟိုပုဒ်မ- ဒီပုဒ်မနဲ့မငြိအောင် သံတမန်စကားပြောတတ်သူ ခွန်ထွန်းဦးဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာတော့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ စွဲချက်ကတော့ ရှမ်း အမျိုးသားတွေ (အပစ်ရပ်- အပစ်မရပ် လက်နက်ကိုင်တွေအပါဝင် ရှမ်းပြည်ရှိ တိုင်းရင်းသားအားလုံး) အားလုံးပါတဲ့ အစည်းအဝေးတခု ကျင်းပမိလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ထောင်ဒဏ် ၁၀၈ နှစ်လားမသိဘူး။ စစ်ကောင်စီ တရားရုံးကနေချလိုက်တာ။ ကျနော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် အဲဒီကာလက နှစ်အရှည်ဆုံးချခံရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၂ မှာ သူတို့ပါတီရဲ့ မဟာမိတ် CRPP အဖွဲ့ဝင် NLD ပါတီက ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်မယ်လို့ကြေညာချိန်မှာတော့ သူ့အပါဝင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ မင်းကိုနိုင်အပါဝင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဇာဂနာအပါဝင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက နိုင်-ကျဉ်း တွေ ရာနဲ့ချီ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရှမ်းပါတီဟာ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ကို မဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ထားတော့...ဒါက နိုင်ငံရေး ဖြတ်သန်းမှုသမိုင်းစဉ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အကျိုးဆက်နဲ့ NLD ပါတီက အမတ် ၄၀ လောက် လွှတ်တော်ထဲရောက်သွားတော့ ကျနော်တို့ ပြည်ပ ရောက်တွေလည်း ပြည်တော်ပြန်ခွင့် ရလာတယ်ဆိုပါတော့...။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလမှာ ၂၅ နှစ်အတွင်း (၁၉၈၈-စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နောက်ပိုင်း) ပထမ ဆုံးအကြိမ် ပြည်တော်ပြန်ခွင့်ရတော့ ခွန်ထွန်ဦးကို ၈ မိုင်က သူ့အိမ်မှာ (အဲဒီတုန်းက SNLD ရုံးခန်းလည်းဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်) ကျနော် တကူးတကာ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အင်တာဗျုးဖို့မဟုတ်ပါ။ မိုးထဲရေထဲကာလက နှစ်ပေါင်းများစွာ မီဒီယာမှာ စကားပြောဖူးသူ ရဲဘော်ရဲဘက်အနေနဲ့သွားရောက် ဂါရဝပြုတာပါ။ CRPP ခေတ်ကအခြေအနေ၊ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ တိုင်းရင်းသားအရေး- ငြိမ်းချမ်းရေး စသဖြင့်အတော်များများ ပြောဖြစ်ပါတယ်။
မီဒီယာသမားတဦးရဲ့ ရင်ဖွင့်သံဆိုတာကလည်း အလွတ်သဘောပြောတာတွေကို ပြန်ပြောလို့မဖြစ်၊ တရားဝင်ပြောတာတွေကိုပဲ ပြန်ပြောရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါလား။ အကြမ်းအားဖြင့်ကတော့ NLD က (CRPP အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းကြားမှာ) ဘာမှကြိုတင်ဆွေးနွေးမှုမလုပ်ပဲ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ဝင်သွားတာကို သူ သိပ် ဘဝင်ကျပုံမရ။ သူက လူထက် မူကို အလေးထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျီုး...။
၂၀၁၅ မှာတော့ သူတို့ပါတီလည်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်က နေရာအတော်များများမှာ (၁၉၉၀ လိုပဲ) အနိုင်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ သူ ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းလို့ဆိုပြီး လူငယ်တွေကို တာဝန်တွေလွဲပေးတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။
၂၀၁၈ မှာ မီဒီယာတာဝန်နဲ့ ကျနော်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ချိန် သူနဲ့ အင်တာဗျုးလုပ်ဖို့ ချိန်းပေမယ့် ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ဆိုပြီး ငြင်းဆိုတဲ့အတွက် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ သူရဲ့ အနီးကပ်ရဲဘော် ဒုဥက္ကဌ (အခု ဥက္ကဌ) စိုင်းညွန့်လွင်နဲ့ပဲ ဗျုးခဲ့ရပါတယ်။
အင်တာဗျုးအပြီး သွားနုတ်ဆက်ဖို့ပြင်ပေမယ့် သိပ်နေမကောင်းလို့ဆိုပြီး မတွေ့ဖြစ်လိုက်ဘူး။ ၂၀၁၁ မှာ စစ်တပ်က တဖန် အာဏာသိမ်းပြန်တော့ ကိုယ်တွေလည်း ရန်ကုန်ကနေ ထွက်ခွါ။ ဆိုလိုတာက အဲဒီ ၂၀၁၃ တွေ့ဆုံမှုဟာ သူနဲ့ နောက်ဆုံးတွေဆုံ ခွင့်ရခြင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ကျနော်ထပ်တွေ့ခွင့်မရလိုက်တဲ့၊ ကျနော်တို့ ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ ရှမ်းခေါင်းဆောင်၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၊ လူထက် မူကို ဦးစားပေးတဲ့ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ခွန်ထွန်းဦး ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းဆိုးကို ကြားခဲ့ ရပါတယ်။
ဒီလို သဘောထားကြီးပြီး လူထက် မူကို ဦးစားပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား၊ လူငယ်တွေကို နေရာပေးတဲ့နိုင်ငံရေးသမား၊ သမိုင်းခေတ်များစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတဦးကွယ်လွန်သွားခြင်းဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအတွက် တကယ့်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်နှင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတိုက်ပွဲက ပန်းတိုင်မရောက်သေး...။
Interview with Salai Htet Ni of CNF. part 2.
5:35 AM Htet Aung Kyaw No comments
“မြို့လယ်ကလွဲရင် ကျေးလက်ဒေသအားလုံးကို တော်လှန်ရေးတပ်တွေက ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်”
(ဆလိုင်းထက်နီ- CNF ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်)
ချင်းပြည်နယ်တွင်းရှိ CDF ဒေသခံ ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ အလွန်အားကောင်းလာပြီး အခုဆိုရင် ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့ကြီးတွေမှအပ ကျေးလက်ဒေသအားလုံးနီးပါးကို ဒေသခံ ကာကွယ်ရေးတပ်တွေက ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဆလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုတနှစ်ကျော်၊ တော်လှန်စစ်တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ချင်းပြည်နယ်က ရုန်းကန် တိုက်ပွဲဝင်မှုအခြေအနေကို BNN သတင်းဌာမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- လက်နက်အင်အားကောင်းတဲ့ စစ်ကောင်စီဖက်က ဘာကြောင့် အကျအဆုံးများနေတာလဲ...
- တော်လှန်ရေးတပ်တွေက နယ်မြေဘယ်လောက်အထိ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်နေပြီလဲ...
- ဒီနှစ်မကုန်ခင် တော်လှန်ရေးတပ်တွေဖက်က စစ်ရှိန် မြှင့်တင်နိုင်ခြေ ရှိသလား...
- EAO နဲ့ PDF ကြားမှာ သွေးခွဲဖို့ကြိုုးစားနေတဲ့ စစ်ကောင်စီအကြံကို ဘယ်လို ရိုက်ချိုးနိုင်မလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(အင်တာနက်လိုင်း မကာင်းတဲ့အတွက် အရုပ်မကြည်တာ- အသံမကြည်လင်တာတွေအတွက် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်)။
Interview with Salai Htet Ni of CNF. part 1
6:45 AM Htet Aung Kyaw No comments
“ပြည်သူတွေကို ကိုယ်တိုင်က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေတာဖြစ်တယ်”
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြသာနာဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ စစ်ကောင်စီကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြသာနာမဟုတ်ပဲ ပြည်သူတရပ်လုံးနဲ့ စစ်ကောင်စီကြားမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြသာနာဖြစ်တာကြောင့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေတဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပါ စစ်ကောင်စီက ဆွေးနွေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဆလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက စစ်ကောင်စီဥက္ကဌက ဖိတ်ခေါ်တဲ့အပေါ် BNN သတင်းဌာမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- စစ်ကောင်စီဥက္ကဌရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်အပေါ် CNF က ဘယ်လိုသဘောထားသလဲ...
- NCA လမ်းကြောင်းကိုပယ်ပြီး NUCC လမ်းကြောင်းနဲ့သွားနိုင်မှ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရမှာလား...
- အသစ်ပေါ်လာတဲ့ CDF တပ်တွေနဲ့ EAO တခုဖြစ်တဲ့ CNF ကြားမှာ ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှု ဘယ်လိုရှိသလဲ...
- တနှစ်တာ တိုက်ပွဲအတွင်း စစ်ကောင်စီဖက်က ထိခိုက်ကျဆုံးမှု သိပ်များနေတာ ဘာကြောင့်လဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ကြားကာလ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပါဝင် နယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်မှုအကြောင်းပါဝင်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
...အင်တာနက်လိုင်း သိပ်မကောင်းတဲ့အတွက် အရုပ်မကြည်တာ- အသံမကြည်လင်တာတွေအတွက် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်)။
Interview with Naing Htoo Aung of MOD-NUG.
5:46 AM Htet Aung Kyaw No comments
“မြိုနယ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်မှာ ကျနော်တို့ဖက်က အုပ်ချုပ်ရေးချ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်”
(ဦးနိုင်ထူးအောင်- အတွင်းဝန်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန- NUG)
တနိုင်ငံလုံးရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၀၀-ကျော်အနက် ၂၀၀-ကျော်မှာ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (ပကဖ)တွေဖွဲ့စည်းထားပြီး မြို့နယ်ပေါင်း ၂၀-ကျော်မှာတော့ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (ပအဖ) တွေဖွဲ့စည်းကာ ကြားကာလဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် ဦးနိုင်ထူူးအောင်ကပြောပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း တနှစ်ပြည့်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်အစီရင်ခံစာပါ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခု ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက်ထဲမှာ...
- PDF တပ်တွေက နိုင်ငံရဲ့ ၁၅% ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတာ ဘယ်လိုအချက်အလက်ပေါ် အခြေခံ ပြောနိုင်တာလဲ...
- PDF တပ် နဲ့ ပကဖ တပ်တွေ ဘယ်လိုကွာခြားပြီး ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသလဲ...
- EAO တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ပေါင်းဖွဲ့ထားတဲ့ C3C အလုပ်ဖြစ်နေပြီလား...
- စစ်ကောင်စီတပ်ထဲကနေ တနှစ်အတွင်း ထွက်ပြေးသူ တသောင်းခန့်နဲ့ ကျဆုံးသူ တသောင်းခန့်ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြောတာလဲ...
- NUG ဦးဆောင်တဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်တာအတွင်း ဘယ်လောက်အထိ ခရီးပေါက်ခဲ့ပြီလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Bo Nagar. part-2.
4:29 AM Htet Aung Kyaw No comments
“တော်လှန်စစ်ကို အရှိန်မြှင့်လိုက်တာနဲ့ စစ်ကောင်စီ အောက်ခြေတပ်တွေ ကျနော်တို့ဖက် ပူးပေါင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်”
(ဗိုလ်နဂါး- ပုလဲဒေသ PDF ခေါင်းဆောင်)
လူအင်အား၊ လက်နက်အင်အား ပိုကောင်းလာနေပြီဖြစ်တဲ့ PDF နဲ့ EAO တပ်တွေဖက်က တော်လှန်စစ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင် စစ်ကောင်စီ အောက်ခြေတပ်သားတွေ တော်လှန်ရေးထဲ ပူးပေါင်းလာလိမ့်မယ်လို့ သူယုံကြည်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း ပုလဲနယ်က PDF ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါးကပြောပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း တနှစ်ပြည့်အခြေအနေ၊ မြန်မာ့ နှစ်သစ်ကူးနောက်ပိုင်း ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- NUG ကပြောတဲ့ နယ်မြေ ၄၅% ကို တော်လှန်ရေးတပ်တွေက ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတာ ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလဲ...
- NUG ရဲ့ စစ်ရေးဦးဆောင်မှုအပေါ် အောက်ခြေ PDF တပ်သားတွေက အားရကျေနပ်ပါရဲ့လား...
- စစ်ကောင်စီတပ်တွင်းမှာ တကယ်ပဲ ပြိုဆင်းနေပြီလား...
- မြန်မာ့နှစ်သစ်မှာ နွေဦးတော်လှန်ရေး အဆင့်သစ်တခုဆီ ထပ်တက်လာနိုင်ခြေရှိသလား... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
(စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းတဲ့အတွက် အရုပ်-အသံ မကြည်မလင်ဖြစ်နေတာကို တောင်းပန်အပ်ပါတယ်)။
Interview with Bo Nagar. part-1
“လက်နက်ကောင်းကောင်းသာရရင် စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ PDF အင်အားနဲ့တင် တနိုင်ငံလုံးကို သိမ်းလို့ရတယ်”
ခုခံတော်လှန်စစ် တနှစ်နီးပါးကြာလာတဲ့အချိန်မှာ တူးမီးအပြင် ခေတ်မီလက်နက်တွေ အတိုင်းအတာတခုအထိ ရလာနေပြီဖြစ်ပေမယ့် မလုံလောက်သေးဘူး။ ခေတ်မီ လက်နက်အပြည့်အစုံသာရမယ်ဆိုရင် စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ တော်လှန်ရေးတပ်သား အင်အားဟာ တနိုင်ငံလုံးကို သိမ်းနိုင်တဲ့အင်အားအထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ပုလဲနယ်က PDF ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါးက ပြောပါတယ်။
- နှစ်သစ်ကူး အားပေးစကား...
- စစ်ကိုင်းတိုင်းက တိုက်ပွဲအခြေအနေ...
- PDF တွေမှာ လက်နက်အင်အား တောင့်တင်းလာပြီလား...
- စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ ချင်းနဲ့ ကချင်နယ်ဒေသတွေမှာ လွတ်မြောက်နယ်မြေ ဘယ်လောက်အထိ ကျယ်ပြန့်လာနေပြီလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
(NUG ရဲ့ စစ်ရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ် ဒေသခံ PDF တွေက အားရမှုရှိ မရှိ အကြောင်းဆွေးနွေးချက်ပါတဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with KNPP. part-2
1:34 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာ မနေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အဆုံးထိ တိုက်ဖို့ လိုပါတယ်”
(ခူဒယ်နီယာ- အတွင်းရေးမှူး ၁- KNPP)
စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာ မနေချင်ဘူး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာနေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျတဲ့အထိ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ၁- ခူဒယ်နီယာက ပြောပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်ကြာလာတဲ့အထိ အချို့ တိုင်းရင်းသားလက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ပါမလာသေးတာ၊ တိုက်ပွဲအရှိန်မမြှင့်နိုင်သေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခုထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက် ဒုတိယ ပိုင်းမှာတော့...
- ကရင်နီဒေသအတော်များများကို တော်လှန်ရေးတပ်တွေက ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလား...
- အခုတိုက်ပွဲဟာ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ ပြည်သူကြားက တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံး ပါဝင်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းချက်...
- တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေအပြင် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း ခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံရေး တည်ချက်လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုချက်...
- စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာ မနေချင်ဘူး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာနေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျတဲ့အထိ တိုက်ပွဲဝင်ရုံမှတပါး အခြားမရှိ... စတဲ့အကြောင်းအရာ တွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with KNPP. Part-1
1:55 AM Htet Aung Kyaw No comments
“KA, KNDF, PDF တွေ အားလုံး နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်”
ကရင်နီဒေသရှိ ကရင်နီတပ် KA ၊ ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF၊ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေအားလုံး နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ပြီး လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး အလားတူပါလာအောင် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အရှိန်မြင့်ကြိုးစားဖို့လိုနေတယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ၁- ခူဒယ်နီယာက ပြောပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်နေတဲ့ NUG အစိုးရ တနှစ်တာ ကာလအတွင်း နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အားရမှုရှိ မရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခုထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက် ပထမ ပိုင်းမှာတော့...
- NUG အစိုးရရဲ့ တနှစ်တာအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် EAO တွေက ဘယ်လိုရှုမြင်ထားသလဲ...
- NUCC မှာ EAO တွေ အားလုံး ပါမလာသေးတာ ဘာကြောင့်လဲ...
- ကရင်နီဒေသဟာ EAO တွေနဲ့ PDF တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှ အားအကောင်းဆုံးဒေသလို့ ဘာကြောင့်ပြောကြတာလဲ...
- ကရင်နီလူဦးရေ ၅၀% ကျော် နေရပ်စွန့်ထွက်ပြေးနေရမှုအပေါ် ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို အကူအညီပေးနေသလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(အခုတော်လှန်ရေးဟာ တိုင်းရင်းသားနဲ့ စစ်အစိုးရကြားမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ လူထုနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကြားမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် လူထုထဲမှာပါတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံး ဒီတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ဖို့လိုတယ်... ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးချက်ပါတဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန် ညပိုင်းမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Than Soe Naing about NUG-one year on.
3:20 AM Htet Aung Kyaw No comments
“EAO တွေနဲ့ တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်မှုဟာ NUG ရဲ့ အဓိက အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်”
နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်နေတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ တနှစ်တာကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAO တွေနဲ့ တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဟာ အဓိက အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံရေး-စစ်ရေး ဝေဖန်သုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ၇ လကြာ အခြေအနေ၊ အဲဒီလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်နေတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဖွဲ့စည်းခြင်း တနှစ်ပြည့် အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခု ထုတ်လွှင့်မယ့် မေးမြန်းချက်ထဲမှာ...
- NUG ရဲ့ တနှစ်တာအတွင်း အအောင်မြင်ဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှုနဲ့ အဓိက စိန်ခေါ်ချက်က ဘာတွေလဲ...
- တနိုင်ငံလုံးရှိ PDF တွေကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာအောက်ရှိ စစ်ဦးစီးချုပ်က အမိန့်ပေးနိုင်နေပြီလား...
- အင်အားတသိန်းရှိ PDF တပ်တွေရဲ့ လက်နက်လိုအပ်ချက်ကို NUG က ဘယ်လို ဖြေရှင်းပေးနေသလဲ...
- မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ EAO အချို့ အခုထိ NUCC မှာ ပါမလာသေးတာ ဘာကြောင့်လဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းတဲ့အတွက် အသံ သိပ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာကို တောင်းပန်အပ်ပါတယ်)။
Interview withalocal PDF leader in Dawei Region.
ထားဝယ်ခရိုင်၊ တောင်ပျောက်ဒေသ PDF ခေါင်းဆောင်တဦးနှင့် မေးမြန်းချက်
ရွာမီးရှို့၊ လူသတ်၊ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်လုပ်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်တာကလွဲပြီး အခြားနည်းမရှိဘူး။ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ တော်လှန်စစ်မှာ ဒေသအသီးသီးက ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ ထားဝယ်ခရိုင် တောင်ပျောက်ဒေသရှိ PDF ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ရဲဘော်ကျောက်ခဲ က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက တောင်ပျောက်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရွာမီးရှို့ခံရမှု၊ အရပ်သားတွေ သတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီးခံရမှုအခြေအနေ၊ နွေဦးတော်လှန်ရေးတနှစ်တာအတွင်း ဒေသတွင်းက ခုခံစစ်ရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- ဧပြီလ ပထမ သီတင်းပတ် ထိုးစစ်အတွင်း စစ်ကောင်စီတပ်က ဒေသခံရွာတွေကို ဘယ်လို မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားသလဲ....
- တောင်ပျောက်ဒေသအပါဝင် တနသာင်္ရီတိုင်းအတွင်းရှိ PDF တွေရဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှု အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲ...
- ခုခံတော်လှန်စစ် တနိုင်ငံလုံး ဟန်ချက်ညီ အရှိန်မြင့်လာနိုင်သလား...
- ပြည်တွင်း- ပြည်ပ အကူအညီပေးမှုတွေက ဒေသခံ PDF တွေအပေါ် ဘယ်လို ခွန်အားဖြစ်စေသလဲ...စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Bo Hla Tint of NUG on US Aid.
3:34 PM Htet Aung Kyaw No comments
“အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီတွေက နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် သိပ်အရေးကြီးပါတယ်”
(ဦးဘိုလှတင့်- NUG အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ သံအမတ်)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးထွန်းကားလာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ချီအကူအညီပေးမယ့် အမေရိကန်လွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာ သံအမတ် ဦးဘိုလှတင့်ကပြောပါတယ်။
အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ကနေ Burma Act of 2021 ကို အတည်ပြုလိုက်တာ၊ အရင်ကချမှတ်ထားတဲ့ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ကျော် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သုံးစွဲခွင့်ရမယ့် အလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခု ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက်ထဲမှာတော့....
- Burma Act of 2021 ထဲမှာ ဘာတွေပါသလဲ...
- ဒီဥပဒေနဲ့ အရင် NDAA ဥပဒေ ဘယ်လိုကွာသလဲ...
- ဒီ ဥပဒေ ၂ ရပ်အရ ရရှိလာမယ့် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ကျော်ကို ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးစွဲမှာလဲ...
- ဒီငွေတွေကို ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုနေရာမှာသုံးခွင့်ရတဲ့အတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေရဲ့အလှူငွေကို PDF အတွက် အပြည့်အ၀ သုံးစွဲခွင့်ရလာတော့ မလား... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(မနက်ဖန်မှာတော့ တနသာၤရီတိုင်းက တိုက်ပွဲအခြေအနေ၊ PDF လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေအကြောင်း ဒေသခံ PDF ခေါင်းဆောင်တဦးနဲ့ မေးမြန်းချက်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Aung Moe Zaw of DPNS.
11:52 PM Htet Aung Kyaw No comments
“စစ်အုပ်စုဆန့်ကျင်ရေး အင်အားစုအားလုံး NUCC မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖု့ိ လိုပါတယ်”
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံး NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ-မှာ ပါဝင်ပြီး အားလုံးလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့လို အပ်နေတယ်လို့ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဌ ဦးအောင်မိုးဇော်က ပြောပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်တာကာလ၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တနှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေ...
- အချို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ NUCC တပ်ပေါင်းစုမှာ ဘာကြောင့် မပါသေးတာလဲ...
- တနှစ်တာအတွင်း စစ်ကောင်စီဖက်က ဘယ်လောက်အထိ ပြိုဆင်းလာနေသလဲ...
- နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် နိုင်ငံတကာရဲ့ အားပေးကူညီမှု တိုးတက်လာပြီလား...
- GZ လူငယ်တွေရဲ့ ကြိုးစားမှုအပေါ် အားပေးစကား...စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Saw Tawni. part-2
3:57 AM Htet Aung Kyaw No comments
“စိုးရိမ်ပါတယ်၊ ဝမ်းနည်းပါတယ်လောက်နဲ့ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ စစ်ရေးအကူအညီပေးဖို့ တောင်ဆိုပါတယ်”
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအပေါ် စိုးရိမ်ပါတယ်၊ ဝမ်းနည်းပါတယ်လောက် ပြောနေရုံနဲ့ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ စစ်ရေးအကူ အညီ ထိရောက်စွာပေးဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် စောတောနီးက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး တနှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်၊ NUG အစိုးရ တနှစ်နီးပါးကြာလာတဲ့အချိန်မှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအလားအလာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
အခု ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက် ဒုတိယ ပိုင်းမှာတော့....
- KNU နဲ့ PDF တပ်တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲ...
- NUG နဲ့ EAO တွေကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အားကောင်းလာပြီလား...
- စစ်ကောင်စီတပ်တွေဖက်က စခန်းစွန့်ထွက်ပြေးတာတွေများလာနေပြီး လေကြောင်းပစ်အားအပေါ် ပိုအားထားလာနေတာ ဘာကြောင့်လဲ...
- ဖြတ်လေးဖြတ် စနစ်ကို ဘယ်လိုခုခံမလဲ...
- နိုင်ငံတကာဖက်က လေနဲ့အားပေးနေပြီး လက်တွေ့ အားပေးမှုမလာသေးတာ ဘာကြောင့်လဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Interview with Saw Tawni of KNU. part-1
2:58 PM Htet Aung Kyaw No comments
“KNU နဲ့ PDF ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုကို ဖြိုခွဲချင်တဲ့အတွက် စစ်ကောင်စီက ထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်”
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း KNU နယ်မြေသို့ စစ်ကောင်စီဖက်က ထိုးစစ်ကြီးတွေဆင်လာမှုဟာ KNU နဲ့ PDF ကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုကို ဖြိုခွဲချင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ပဒိုစောတောနီးက ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီဖက်ကနေ မီဒီယာပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်လှမ်းပြီး တကယ့်မြေပြင်မှာ စစ်ကြောင်းတွေ ထိုးလာနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- ချင်းမိုင်မှာကျင်းပနေတဲ့ NCA အဖွဲ့များ ညီလာခံသို့ KNU ဥက္ကဌ တက်ရောက်တာ ဘာကြောင့်လဲ...
- NCA လမ်းကြောင်းကို KNU က လုံး၀ ပယ်ချလိုက်ပြီလား...
- တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် EAO အဖွဲ့ ၃ မျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ...
- KNLA တပ်မဟာ ၇ ခုစလုံး PDF တွေနဲ့ ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေပြီလား...
- အခုရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်ကောင်စီက ထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်လာတာ ဘာကြောင့်လဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
(နွေဦးတော်လှန်ရေးကို အားပေးတယ်ဆိုရင် လက်နက် ကူညီပါ။ လေနဲ့အားပေးနေလို့မရဘူး- ဆိုတဲ့ အချက်ပါဝင်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Bo Than Mani of YMBPDF. 1
4:58 AM Htet Aung Kyaw No comments
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်က ဗိုလ်သံမဏိနှင့် မေးမြန်းချက်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ယင်းမာပင်မြို့နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူငယ် ၁၀ ဦး အသတ်ခံရမှုကို NUG စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မီတီက ဆက်လက်စစ်ဆေးနေပြီး သူတို့အဖွဲ့က အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိသူလို့ စွပ်စွဲခံထားရသူ ဗိုလ်သံမဏိကပြောပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီအမှုကို သတင်းမထုတ်ပြန်ဘူး၊ အများမသိအောင် ဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က စွပ်စွဲချက်တွေနဲပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
အခု ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက်ထဲမှာ....
- နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က အမှန်တကယ် ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ...
- NUG စုံးစမ်းရေးအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေကို အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ပြီလား...
- ဗိုလ်သံမဏိနဲ့ ယင်းမာပင် ကာကွယ်ရေးတပ်က စစ်ကောင်စီကို ဘယ်လို တိုက်ခိုက်နေသလဲ...
- စစ်ကိုင်းတိုင်းက တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
(ဗိုလ်သံမဏိရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ ဘာသာရေးအသုံးအနှုံးမသုံးပဲ အရပ်သားအခေါ်အဝေါ်များကိုသာ အသုံးပြုထားပါသည်)။
Interview with U Ko Naing of NUG-Australia. Part-1
6:10 AM Htet Aung Kyaw No comments
CDM စစ်ဖက်အရာရှိတွေကို သြစတေလျက ဗီဇာ ထုတ်ပေးမှုအကြောင်း မေးမြန်းချက် (၁)
အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မကြိုက်လို့ တပ်မတော်ကနေ ထွက်ခွာလာသူ စစ်ဖက်အရာရှိအချို့ကို သြစတေလျ အစိုးရက ဗီဇာ ထုတ်ပေးတာဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် အားဖြစ်စေတယ်လို့ သြစတေလျနိုင်ငံဆိုရာ NUG ရုံးရဲ့ပြောခွင့်ရသူ ဦးကိုနိုင်က ပြောပါတယ်။
CDM လုပ်ပြီး တပ်မတော်ကနေ ထွက်လာသူ အနည်းဆုံး စစ်ဖက်အဆင့်မြင့်အရာရှိ ၂ ဦးကို သြစတေလျအစိုးရက ဗီဇာ ထုတ်ပေးခဲ့တယ်၊ အခု သြစတေလျနိုင်ငံဆီ ရောက်နေပြီ၊ နောက်ထပ်လည်း ဗီဇာ ဆက်ပေးမယ့်အလားအလာရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနမှ ဦးထက်အောင်ကျော်က မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလို ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
- CDM လုပ်ပြီး တပ်မတော်ကနေ ထွက်လာတဲ့ စစ်ဖက်အရာရှိတွေကို သြစတေလျ အစိုးရက ဘယ်လို ဗီဇာ ထုတ်ပေးနေတာလဲ...
- CDM လုပ်မယ့် တပ်မတော်သားတွေက ဗီဇာ ရရေးအတွက် ဘယ်လို အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုသလဲ...
- တပ်မတော်တွင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးနေသလဲ...
- CDM လုပ်ပြီး တပ်မတော်ကနေ ထွက်လာသူတွေကို နွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေက ဘယ်လို ကြိုဆိုအားပေးသင့်သလဲ... စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
(စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို တရားစွဲဖို့ပြင်နေတာအပါဝင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ် အားပေးထောက်ခံမှုအကြောင်းပါဝင်တဲ့ ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
ယင်းမာပင် လူသတ်မှုကြီးနောက်ကွယ် (မွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းထားရန္ တင္ထားပါသည္)
12:19 PM Htet Aung Kyaw No comments
လူငယ်လေးဦးလိုက်ပါလာသော ဒဗယ်ကက်အဖြူရောင်လေးတစ်စီးသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်မြို့နယ် သံတောင်လပို့ရွာမှသည် ယင်းမာပင်ဘက်သို့ အမေရေယာဉ်လမ်းမအတိုင်း နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် သောကြာနေ့ နံနက်ကမောင်းနှင်သွားသည်။ ကားမောင်းသူက ခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏သား ကိုကောင်းခန့်ကျော်ဖြစ်ပြီး ကားပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲ မီးသတ်ရဲဘော်များဖြစ်ကြသော ကိုသက်ပိုင်ထွန်းနှင့်ကိုစိုးကိုကိုတို့အပြင် တောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သော ကိုအောင်နိုင်လင်းလည်း လိုက်ပါခဲ့သည်။
အလုပ်လုပ်ရင်းမတော်တဆခြေထောက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့သော ကိုသက်ပိုင်ထွန်းကို ယင်းမာပင်မြို့တွင်ဆေးကုရန်အတွက် နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်တွင် ထွက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ မီးသတ်တံဆိပ်ပါသော ကားပေါ်တွင် အပိုပစ္စည်းဆို၍ ချိုင်းထောက်တစ်ခုသာပါသွားခဲ့သည်။
သူတို့ကားမထွက်ခင်ကတည်းက လမ်းခရီးတွင်ကားကိုမှားယွင်းပြီး မိုင်းမဆွဲမိစေရန် သံတောင်လာပို့ရွာရှိ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငယ်ခေါင်းဆောင် ကိုထိုက်မောင်ကို အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ယင်းမာပင်မရောက်ခင်စပ်ကြား ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တစ်ခုနားအရောက်မှာပင် လက်နက်ကိုင်လူတစ်စုက သူတို့ကားကိုရွေးလို့တားလိုက်ကြသည်။
" ၁၀ နာရီမတ်တင်းကြတော့ ကလေးက ကျမဆီကိုဖုန်းဆက်တာရှင့်။ ကျနော်တို့ကိုတော့တဲ့ PDF ( ကာကွယ်ရေးတပ်) တွေကတားထားတယ်။ တားထားတယ်ဆိုတော့ မင်းတစ်စီးတည်းတားတာလား၊ အများကိုတားတာလားလို့ ကျမကမေးတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့၊ အများမတားဘူး၊ သားတို့တစ်စီးတည်းတာတာတဲ့" ဟု အဖမ်းခံရသူတွေထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သူ၏ ဆွေမျိုးရင်းဖြစ်သူက MCIJ သို့ပြောသည်။
“ အဆင်ပြေမှာပါခင်ဗျားတဲ့။ (ဖမ်းထားတဲ့အဖွဲ့) ဗိုလ်လာရင်ပြေမှာပါတဲ့။ သူကအဲသလိုပြောတော့ ကျမကလည်း အေးအေးဆိုပြီး ဖုန်းတော့ချနေလိုက်တာ။ ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးသွားသူများမှာ YMB PDF ဟုအတိုကောက်ခေါ်သော ယင်းမာပင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မှ တပ်ခွဲမှူးအဆင့်ရှိသူ ကိုတိုက်ကောင်းနှင့် ရပ်ကျေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုဇော်လတ်တို့ဖြစ်ကြောင်း နောင်တွင်သိရှိလာခဲ့ကြရသည်။ YMB PDF ကိုဦးဆောင်သူကား သပြေအေးဆရာတော်ဟုလည်း လူသိများသည့် ဗိုလ်သံမဏိဖြစ်သည်။
နံနက် ၁၀ နာရီထိုးတွင် ကိုတိုက်ကောင်းဆိုသူက " ထိုက်မောင်ရေ မင်းတို့ရွာက ကလေးလေးယောက်နဲ့ကားတစ်စီးကိုတော့ ငါခေါ်သွားပြီ" ဟု ဖုန်းဆက်လာတော့သည်။ ဒီဒေသမှာတော့ အဖွဲ့မတူသော်လည်း အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လှန်သော ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားအဆက်သွယ်ရှိတတ်ကြသည်။
ဖမ်းသွားပြိီဆိုတော့ လူငယ်များကိုပြန်တောင်းယူရန် ကိုထိုက်မောင်၊ ကိုအောင်ကိုဝင်း၊ ကိုသိန်းထွန်းအေး၊ ကိုဝင်းမင်းထက်၊ ကိုသိန်းလွင်ဌေးနှင့် ကိုဗိုလ်ထက်တို့က လက်လှုပ်ရွာသို့ ဆိုင်ကယ်သုံးစီးဖြင့် လိုက်သွားကြသည်။ နှစ်ဦးမှာ သေနတ်တိုနှစ်လက်ပါသွားခဲ့သည်။ ကိုထိုက်မောင်က နယ်ခံကာကွယ်ရေးတပ် Hero Tiger Force အဖွဲ့၏ရပ်ကျေးတာဝန်ခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ကိုအောင်ကိုဝင်း၊ ကိုသိန်းထွန်းအေးနှင့် ကိုဗိုလ်ထက်တို့က အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ကျန်နှစ်ဦးကတော့ စစ်သင်တန်းတက်ရန်ပြင်ဆင်နေသူများဖြစ်သည်။ Hero Tiger Force အဖွဲ့ငယ်သည် ဗိုလ်နဂါးဦးဆောင်သည့် ထိုစဉ်က ပုလဲပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟူသော အမည်သာရှိသေးသည့်တပ်ဖွဲ့နှင့် မဟာမိတ်ဖြစ်ကာ စစ်ဆင်ရေးများ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြသည်။
နေ့လယ် ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် ကယ်ဆယ်ရန်သွားသူ ခြောက်ယောက်အဖွဲ့၏ တယ်လီဖုန်းများပါ စက်ပိတ်သွားကာ အဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားတော့သည်။
ကနဦးတွင်တော့ ခေတ္တထိန်းထားသည်ထင်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ၄၈ နာရီခန့်ကြာလာသည့်အခါ စိတ်ပူလာပြီး ဗိုလ်နဂါးကိုယ်တိုင်နှင့် သူ၏တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၇၀ ခန့်သည် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည်ဟုသတင်းရသော ကပိုင်စခန်းသို့လိုက်သွားကြသည်။ ကပိုင်ရွာတွင် ကျောင်းဆရာမှသည် ဗိုလ်သံမဏိတပ်ဖွဲ့၏တပ်ရင်း (၄) တပ်ရင်းမှူးဖြစ်လာသော ဆရာစံ (ခ) ဦးစံကျော်လင်းစခန်းချနေထိုင်သည်။
" ကပိုင်ရွာထဲကို ဗိုလ်နဂါးအဖွဲ့တွေကိုပေးမဝင်ဘူး။ လက်နက်ကိုင် ၅၀ လောက်က သေနတ်နဲ့ချိန်စောင့်နေတယ်။ အိမ်တစ်လုံးပေါ်ကနေ ဗိုလ်နဂါးတို့အဖွဲ့ကိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်။ အဲမှာစကားများမလိုဖြစ်ပြီး ဗိုလ်နဂါးတို့ပြန်သွားကြတယ်" ဟု သားကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရသူ၏ ဆွေမျိုးကပြောသည်။
" ကျမတို့ကလေးက ခြေထောက်ကနာနေတာလေ၊ ကျိုးသလားမသိ ဘာလားမသိ။ အဲသလိုလူကို အဲ့ CDM ဝင်ထားတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ကဆေးထိုးပေးတယ်လို့ကျမတို့ကကြားတော့ ကျမတို့ရွာကကောင်ကလေးနဲ့က မယားညီအစ်ကိုတဲ့။ ဆေးထိုးပေးတဲ့ကလေးက ရှိတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေ ကပိုင်စခန်းထဲမယ် စစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ညနေကျတော့လည်း လာထိုးလှဲ့ဦးတဲ့။ အဲဒီဆရာလေးနာမည်က ကိုစောမင်းအောင်တဲ့။ ညနေကျတော့ သူကတစ်ခေါက်သွားမထိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ဒီ လာပို့က ကလေးတွေမှန်းလည်းသိတော့ သူတို့ဆရာနေမှာပေါ့၊ ကျနော်ဘယ်အချိန်လာထိုးရမလဲဆိုတော့ ထိုးစရာမလိုတော့ဘူး၊ မလာခဲ့တော့နဲ့ စခန်းပြောင်းလိုက်ပြီလို့ သူ့ကိုလည်း အဲသလိုပဲပြောတာတဲ့" ဟု ဆက်ပြောသည်။
ထို့နောက်မှာတော့ အဖမ်းခံခဲ့ရသူ ၁၀ ယောက်လုံး အသတ်ခံရပြီလား၊ အသက်ရှင်နေသေးလား တိတိကျကျမသိရှိရတော့ဘဲ ဆွေမျိုးသားချင်းများလည်း ရဲရဲမစုံစမ်းဝံ့သည့်အနေအထားဖြစ်နေခဲ့တော့သည်။
ကပိုင်၊ သံတောင်လာပို့နှင့် လက်လှုပ်ရွာများသည် တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ အစဉ်တိုင်းဖြစ်ကာ ခြောက်မိုင်ခန့်ဝေးပြီး အမေရေယာဉ်လမ်းသည် ၎င်းရွာများနှင့်ယင်းမာပင်မြို့ကိုဆက်စပ်ပေးထားသော လမ်းမဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရာတွင်အားကောင်းသော စစ်ကိုင်းတိုင်း၏ ယင်းမာပင်နယ်တွင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များလှသလို စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအထိနာစေသောတိုက်ပွဲများလည်းဆင်နွှဲနိုင်ကြသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျေးရွာပေါင်း ၁၆၈ ရွာရှိကာ အိမ်ထောင်စု ၃၀,၀၀၀ နီးပါးရှိသော ယင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်း တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ဂဏန်းရှိသော ဗိုလ်သံမဏိအဖွဲ့အပါအဝင် အဖွဲ့ကြီးငယ် ဒါဇင်နှင့်ချီရှိသလို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အကြား သင်္ကာမကင်းဖြစ်မှုနှင့် ဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်မှုတချို့ကြောင့် အရပ်သားများမလုံခြုံမှုကလည်း ရှိနေသည်။
ဒေသတွင်း ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကတော့ " ကိုယ့်အဖွဲ့နာမည်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တင် ၆၃ ဖွဲ့ရှိတယ်၊ နာမည်မရှိဘဲ လက်နက်ကိုင်ထားတာတွေလည်းအများကြီးပဲ" ဟု MCIJ ကိုပြောသည်။
ယင်းမာပင်နှင့် ပုလဲမှာ နယ်နမိတ်ထိစပ်နေသော မြို့နယ်များဖြစ်ကြပြီး တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ငယ်များမှာ မြို့နယ်ကွဲပေဦးတော့ အလျဉ်းသင့်ရာအဖွဲ့ကြီးများနှင့်ပူးပေါင်းကာ စစ်ဆင်ရေးများဆင်နွှဲတတ်ကြသည်။
ဆယ်ဦးဖမ်းဆီးခံရသည့်အဖြစ်အပျက်မတိုင်မီက Hero Tiger Force အဖွဲ့ဝင်တချို့နှင့် ဗိုလ်သံမဏိတပ်တွင် အင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်သော တပ်ရင်း (၄) အဖွဲ့ဝင်တချို့ အကြား ရန်စဖြစ်စေသောအဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့ဖူးသည်။
"၉ လပိုင်းလောက်ကဖြစ်မယ်၊ စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းတွေလာမယ်ကြားလို့ ပုလဲနဲ့ ယင်းမာပင်နယ်စပ်၊ တမာပင်ဂွရွာနဲ့ ပုပ္ပါးရွာကြားမှာ မိုင်းတွေထောင်ကြတာ ကိုထိုက်မောင်တို့်အဖွဲ့ကလည်း မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်။ ဆရာစံတို့ တပ်ရင်း (၄) ကလူတွေလည်းမိုင်းတွေထောင်ကြတယ်။ အဲ့မှာ ဆရာစံအဖွဲ့ကသူတွေက မိုင်းလာစစ်တဲ့အချိန် ကိုထိုက်မောင်တို့အဖွဲ့ဘက်က မတော်တဆ မိုင်းကြိုးကို ခလုတ်တိုက်ရာကနေ မိုင်းကွဲသွားတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဆရာစံတို့လူတွေထိခိုက်တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရတယ်။ ဘယ်လိုသိရလဲဆိုရင် တပ်ရင်း (၄) ထဲမှာ အသိတပ်သားတွေရှိတယ်။ သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်မိတော့ ပြန်ပြောပြကြတာ။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒီကိစ္စကို ဆရာစံတို့ဘက်က ခေါ်တွေ့ပြီး ဒဏ်ငွေရိုက်တယ်ဆိုလားပြန်ကြားရတယ်” ဟု Hero Tiger Force အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြန်ပြောသည်။
"သတင်းတွေကြားနေရတာတော့ (နိုဝင်ဘာ) ၂၆ ရက်နေ့ညကိုက အကုန်လုံးသတ်လိုက်တယ်လို့ကြားတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဇစ်မြစ်ကိုလိုက်တော့လည်း ဘယ်သူမှမပြောနိင်ဘူး။ ... အဲဒီညကကိုထုတ်ပြီးတော့ သဲဖြူချောင်းမယ် ၁၀ ယောက်လုံးကို ဓါးနဲ့ခုတ်သတ်တယ်လို့လည်းကြားတယ်ရှင့်" ဟု ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဗိုလ်သံမဏိကတော့ ၁၀ ယောက်လုံး လူ့လောကမှာမရှိတော့ကို ဝန်ခံပြောကြားသည်။
" သူတို့လေးယောက်က အရင် အချုပ်ခန်းထဲထဲ့ခံရတယ်။ လေးယောက်ကို လာထုတ်တဲ့သူတွေက PDF အဖွဲ့ကို မိုင်းဆွဲဘူးတယ်ပြောတယ်၊ အဲ့မှာတွေ့ကြပြီး မေးကြမြန်းကြရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိ ဖြစ်တယ်၊ ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ ပထမ လေးယောက်၊ နောက်လိုက်ထုတ်တဲ့ခြောက်ယောက်ပေါ့ ၊ ပြောချင်တာကတော့ အဲ့ ၁၀ ယောက်ကမရှိတော့ပါဘူး။ အဲ့လို ပဋိပက္ခဖြစ်ရင်းနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးကြရပါတယ်၊ ဒီအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ အခုလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်၊ နောက်လည်း အခုလိုမဖြစ်အောင် အမိန့်ကြေညာချက်တွေ တိတိကျကျထုတ်ထားပါတယ်။" ဟု ဗိုလ်သံမဏိက MCIJ ကို ပြောသည်။
၁။ သက်ပိုင်ထွန်း- မီးသတ်ဝန်ထမ်း (ခြေထောက်ဒဏ်ရာရသူ) ၂၅ နှစ်
၂။ စိုးကိုကို - မီးသတ်ဝန်ထမ်း- ၃၁ နှစ်
၃။ ကောင်းခန့်ကျော်- ကျောင်းသား- ၁၉ နှစ်
၄။ အောင်နိုင်လင်း-တောင်သူ- ၂၅ နှစ်
၅။ ထိုက်မောင်- PDF တပ်ခွဲမှူး- ၃၄ နှစ်
၆။ ဗိုလ်ထက်-PDF တပ်သား- ၃၆ နှစ်
၇။ သိန်းထွန်းအေး- PDF တပ်သား- ၂၇ နှစ်
၈။ အောင်ကိုဝင်း- PDF တပ်သား- ၂၄ နှစ်
၉။ ဝင်းမင်းထက်- PDF တပ်သား- ၂၁ နှစ်
၁၀။ သိန်းလွင်ဌေး-PDF တပ်သား- ၄၀ နှစ်တို့ဖြစ်ကြသည်။
ကိုဝင်းမင်းထက်နှင့် ကိုအောင်နိုင်လင်းတို့မှာ ညီအစ်ကိုအရင်းများဖြစ်ကြပြီး ကိုသိန်းလွင်ဌေးကတော့ သူတို့၏ဝမ်းကွဲအစ်ကိုဖြစ်သည်။ အသတ်ခံရသူများအနက် ရှစ်ဦးမှာ သံတောင်လာပို့ရွာ သားများ ဖြစ်ကြသည်။
အစုလိုက်အသတ်ခံရမှုဖြစ်ပွားအပြီး သုံးလကျော် လေးလနီးပါးအကြာ မတ်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် Hero Tiger Force ပါပါဝင်သော စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ၆၃ ဖွဲ့က ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရာ နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ငလျင်ကြီးတစ်ခုလှုတ်ခတ်သွားခဲ့သည်။
ယင်းကြေညာချက်ထဲတွင် " YMB PDF နှင့် ၎င်း၏သစ္စာခံ တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့များသည် ဒေသခံပြည်သူလူထုကို ခြိမ်းခြောက်၊ နှိပ်စက်၊ ဖမ်းဆီး၊ လုယက်၊ သတ်ဖြတ်နေလျက်ရှိပါသည်။" ဟု စွပ်စွဲချက်ပြင်းပြင်းပါရှိသည်။
ဗိုလ်သံမဏိအဖွဲ့ ကျူးလွန်သော လူသတ်မှုပေါင်း ငါးမှုရှိပြီး စုစုပေါင်း လူ ၂၁ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရသည်ဟုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အသတ်ခံရသူများတွင် ပြည်သူ ၁၂ ဦး၊ ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၊ ကာကွယ်ရေးတပ်သား ခုနှစ်ဦးနှင့် ထောက်ပို့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးတို့ပါဝင်သည်ဟုဆိုသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူများစာရင်းတွင် စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးပါဝင်ပြီး ဗိုလ်သံမဏိကိုယ်တိုင်နှင့် YMB PDF စစ်ဒေသမှူးတစ်ဦး၊ တပ်ရင်းမှူးအဆင့် သုံးဦး၊ တပ်ခွဲမှူးနှစ်ဦး၊ တပ်စုမှူးသုံးဦး၊ နယ်မြေစည်းရုံးရေးတာဝန်ခံတစ်ဦး၊ တပ်သားတစ်ဦးနှင့် ထောက်ပို့တစ်ဦးတို့ပါဝင်သည်။
ဆရာစံ၊ ကိုတိုက်ကောင်းနှင့် ကိုဇော်လတ်တို့ကိုလည်း ကျူးလွန်သူသံယစာရင်းတွင်တွေ့ရသည်။
ယင်းမာပင်မြို့နယ် သပြေအေးကျေးရွာဇာတိဘွား အရှင်သောပါကသည် ရန်ကုန်သာသနာ့တက္ကသိုလ်တက်နေခိုက် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လအတွင်း ယခုအခါ စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားသည့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကွမ်းခြံကုန်းသို့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်သွားရာ ရဲနှင့်စစ်ထောက်လှမ်းရေးများက တားမြစ်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားစဉ် သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးသော သံဃာတော်များတွင် အရှင်သောပါကလည်းပါဝင်သည်။ ထိုတွေ့ဆုံမှုကြောင့် အရှင်သောပါကသည် သာသနာ့တက္ကသိုလ်မှကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ပြည်ပထွက်သွားရာ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရခဲ့သည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှုအပါအဝင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်တို့တွင် မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ခရီးရှည်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် သတင်းမီဒီယာများတွင်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ အတွင်း Radio Free Asia (RFA) မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွင် သံဃာ့ရှုဒေါင့်အစီအစဉ်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ကာ သံဃာများကို အင်တာဗျူးများထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီး မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြခဲ့သည်။ ထိုဆန္ဒပြမှုကြောင့် " ရွာကိုပြန်ပို့ခံခဲ့ရသည်" ဟု အရှင်သောပါက က MCIJ ကိုပြောသည်။ ရွာတွင် စာကြည့်တိုက်တည်ထောင်ခြင်းနှင့် ကလေးငယ်များပညာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ယမန်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်က နေပြည်တော်တွင် စစ်တပ်က အရပ်သားအစိုးရထံက အာဏာသိမ်းသည့်အခါ ဆန္ဒပြမှုများကို ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
" အာဏာရှင်တွေ အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့တိုးတာ၊ တိုးတဲ့အခါကျ‌တော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဆန္ဒပြတာပါပဲ၊ ဧပြီလ ၂ ရက်မှာ စစ်တပ်က အလုံးအရင်းနဲ့ လာဖမ်းတာကို ခုခံစစ် ဆင်နွှဲရင်းနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့။ သပြေအေးကနေစပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပျံ့ပျံ့ဖြစ်သွားတာ ၊ ကျုပ်ကတော့ အကြမ်းမဖက်ရေးဝါဒကို ယုံကြည်တာ" ဟု အရှင်သောပါက (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်သံမဏိက ပြောသည်။
ယင်းမာပင်နယ်တစ်ကြော၌ ယမန်နှစ် မတ်လဆန်းကတည်းက ကျေးရွာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ စတင်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဦးသောပါကသည် စည်းရုံးလှုပ်ရှားကာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ တူမီးသေနတ်များဖြင်ပြုလုပ်ရသော အခြေခံစစ်သင်တန်းများဖြစ်မြောက်ရေးတွင် ပါဝင်ကြီးကြပ်ပေးခဲ့သည်။ သင်တန်းကို တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် သွားရောက်သင်ကြားခဲ့သူများက ပြန်လည်ပို့ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းမာပင် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုတည်ထောင်သည့်အခါ ဗိုလ်သံမဏိဟူ၍ ဘွဲ့ခံယူခဲ့သည်။
" ပထမဆုံးကတော့ သပြေအေးတိုက်ပွဲပေါ့၊ ထရော်ကျင်းရွာတိုက်ပွဲမှာလည်း စကစတွေအများကြီး ကျခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း တိုက်ပွဲတွေက အများကြီး ဖော်ဆောင်တာ ရှိတယ်။" ဟု ဗိုလ်သံမဏိက ပြောသည်။ သပြေအေးရွာနှင့် ထရော်ကျင်းရွာတို့တွင် ယမန်နှစ် ဧပြီလနှင့် ဇွန်လအတွင်းကဖြစ်ပွားသော စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် သူ၏တပ်များအကြားတိုက်ပွဲများကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းမာပင် PDF အဖွဲ့က ကျူးလွန်သည်ဆိုသော လူသတ်မှုစွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) ၏ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်မမှန်၊ တယ်လီဖုန်းမလွယ်သောဒေသများတွင် အဝေးကနေ လနှင့်ချီ၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် ဦးနိုင်ထူးအောင်က " (အသတ်ခံရသူ) သူတို့ပြောသလောက် များချင်မှများလိမ့်မယ်၊... ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတော့ရှိတယ်။ ၁၀ ယောက်တော့ကျိမ်းသေပေါက်ရှိတယ်။ ကျနော်တို့အဲဒါကိုတွေ့ရှိတယ်။" ဟု ပြောသည်။
" ယင်းမာပင် PDF လို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပြောရမှာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယင်းမာပင် PDF ထဲမှာ အဲဒီလူတွေက အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လား မဖြစ်လား။ ... အဲဒီထဲက လူတစ်ချို့က ပြစ်မှုကျူးလွန်နေတာတော့ဟုတ်တယ်။ အဲဒါပေါ်တယ်။" ဟု သူက ပြောသည်။
လူသတ်မှုကျူးလွန်သည်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်သံမဏိက "လူသတ်မှုကိစ္စတွေက တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်တာ မရှိဘူး၊ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ဒါကို အမိန့်ပေးတာမျိုးလည်း မရှိဘူး၊ ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖို့လည်း ကျုပ်ရဲ့ တပ်ရင်းမှူးတွေအားလုံးကို လမ်းညွှန်မှုတွေ‌ပေးတယ်၊အဲ့အတွက်လည်း ကြေညာချက်ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်"ဟု ပြောသည်။
သို့သော် " နိုဝင်ဘာလာ အရှေ့ပိုင်းကဟာတွေတော့ တာဝန်မယူနိုင်ဘူး၊ ဒီလိုမျိုး လက်လွတ်စပယ်မဖြစ်အောင်လည်း တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်တွယ်နေပါတယ်။" ဟု ပြောသည်။
ယင်းမာပင်တွင် ဗိုလ်သံမဏိအဖွဲ့က အင်အားအတောင့်တင်းဆုံးဖြစ်သလို ပုလဲကဗိုလ်နဂါးကလည်း နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့တော်ဝင်နဂါးတပ်တော်ဟူ၍အမည်ပြောင်းကာ ဒေသစုံလွှမ်းခြုံရန်ကြိုးစားလာခဲ့သည်။ နှစ်ဖွဲ့လုံးကလည်း တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကောင်းသည်။
ကာကွယ်ရေးတပ်က ဥပဒေမဲ့ လူသတ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန်ပြောဆိုရန် အရပ်သားများအကြား မဝံ့မရဲဖြစ်ကြသလို စစ်ကောင်စီအမြတ်ထုတ်မှာကိုလည်း စိုးရိမ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း လေးလနီးပါးကြာလာသည့်အခါ လူမှုကွန်ရက်ပေါ် ရောက်လာတော့သည်။
" ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီကိစ္စဟာ သာမန်မှားယွင်းမှုမဟုတ်တာသိပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေသက်သာအောင် မဟာမိတ်တွေကို ထိန်းထားပြီး MOD (အဲန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန) ရဲ့ဦးဆောင်ဖြေရှင်းမှုကိုသာ လိုက်နာဖို့ပြောဆိုညှိုနှိုင်းပြီးတော့ ပြဿနာဖြစ်ပြီး ချက်ခြင်းဆိုသလို ရက်ပိုင်းအတွင်း ခေါင်းဆောင်တချို့အပါအဝင် နစ်နာသူများအချို့နှင့် MOD ကတာဝန်ရှိသူတချို့ကို ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်တွေ့ဆုံပေးခဲ့ပါတယ်...အဲဒီလို MOD နဲ့မတွေ့သေးခင်တစ်ရက်မှာလည်းမြေပြင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရသည့်ရဲဘော်မိသားစုများအပါအဝင် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါ၍ သပြေအေးအဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးရန်ချိန်းဆိုပြီး ၎င်းတို့အဖွဲ့ချိန်းဆိုရာ၎င်းတို့၏နယ်မြေအတွင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိချိန်တွင် သပြေအေးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်သံမဏိမှာ တစုံတရာ ဖြေရှင်းခြင်းလည်းမရှိဘဲ ရှောင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ရက်မှာ တစ်နေရာထပ်မံချိန်းဆိုပြီး လာရောက်တွေ့ဆုံဖြေရှင်းရန် ကတိပြုခဲ့ကြသော်လည်း တွေ့ဆုံရန်ကတိဖျက်၍ ရှောင်နေခဲ့တာ ယနေ့ထိပင်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ဗိုလ်နဂါးက မတ်လ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် လူမှုကွန်ရက်တွင်ရေးသားသည်။
" ဒီကိစ္စမျိုးဟာ အပြန်လှန်တွန်းကန်နေကြရပြီဆိုတာကို တဘက်ကသိရင် ဝမ်းသာစရာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မရှင်းဘဲထားပြီး ပိုပိုဆိုးလာရင် ဒါမျိုးဟာ တော်လှန်ရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း အများကြီးကို စိတ်တွေထိန်းပြီး တိတ်တိတ်လေးနဲ့ပြေလည်သွားအောင် ကြိုးစားဖြေရှင်းနေကြပါတယ်။ အဲလိုဖြေရှင်းနေတဲ့ကြားက သတ်ဖြတ်မှုတွေထပ်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါ့အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ ၎င်းတို့သပြေအေးလက်အောက်ကတပ်ရင်းတစ်ခုမှ ဟီးရိုးတိုက်ဂါးအဖွဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို သတ်ဖြတ်မယ်ဆိုတာထိ ခြိမ်းခြောက်လို့ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ဝင်ပါဖြေရှင်းထားခဲ့ရပါတယ်" ဟု ဆက်လက်ရေးသားထားသည်။
ဒေသခံအဖွဲ့ငယ်တစ်ချို့က ဗိုလ်သံမဏိအဖွဲ့ကို စွပ်စွဲချက်တွင် သစ်မှောင်ခိုလုပ်သည်ဆိုသောစွပ်စွဲချက်လည်းပါသည်။
သို့သော် ဗိုလ်သံမဏိက " သစ်မှောင်ခိုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်း မှားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျုပ်အဖွဲ့က များသောအားဖြင့် သစ်ကိုခိုးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းတာ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလောင်းတော်ကဿပနယ်မြေက သစ်တွေခိုးနေသူတွေကိုဖမ်းပြီး ဒဏ်ရိုက်တယ်၊ ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့သူတွေက သစ်မှောင်ခိုလုပ်နေတဲ့သူတွေက မကောင်းသတင်းတွေ လွှင့်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်" ဟု MCIJ ကို ပြောသည်။
" တစ်ဖက်က စွပ်စွဲထားသလို တိုက်ပွဲတွေ မဖော်ဆောင်ဘဲ လက်နက်တွေကိုင်ထားတယ်ဆိုတာက ပြောမယ်ဆိုရင် အဲ့စွပ်စွဲတဲ့သူတွေက သူများတိုက်ပွဲတွေကို လိုင်းပေါ်တင်ပြီး အလှူခံစားနေတဲ့သူတွေ၊ ကျုပ်က အဲ့ဒါကိုသိတယ်၊ သူတို့က မနာလိုဖြစ်ပြီး တမင်သက်သက်စွပ်စွဲချက်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ မူဝါဒကတော့ ကိုယ်တိုက်ခဲ့တာတွေကို လိုင်းပေါ်တင်ပြီး အလှူခံစားတာမရှိဘူး။ အေးအေးလူလူနဲ့တိုက်ပြီး အသာလေးနေတယ်။ အဲ့တာကိုတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောနိုင်တယ်။" ဟုလည်း ပါရှိသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်တော့ ဗိုလ်နဂါးအဖွဲ့၊ ဗိုလ်သံမဏိအဖွဲ့နှင့် Hero Tiger Force အဖွဲ့များမှာ အခြားသောတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များလိုပင် ရန်သူတော်ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်နဂါးရှိကြောင်း သတင်းရ၍ စစ်ကောင်စီတပ်များက ပုလဲမြို့နယ် ဦးနှောက်ရွာကိုဝိုင်းကာ ရဟတ်ယာဉ်သုံးစီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်နဂါးလွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း ရှစ်ဦး သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်သံမဏိ၏ ယင်းမာပင်မြို့နယ် သပြေအေးရွာကိုလည်း ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်ရောက်လာသော စစ်ကောင်စီတပ်က စီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီး လူနေအိမ်များမီးရှိုရာ ရွာသားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး အိမ် ၁၀၀ ကျော် မီးလောင်သွားသည်။
မတ်လ ၁၂ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်က ယင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ စခန်းအချို့ စစ်ကောင်စီတပ်၏ မီးရှို့ဖျက်စီးခြင်းခံခဲ့ရပြီး နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် တဲများ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရကြောင်း Hero Tiger Force က မတ်လ ၁၅ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Data for Myanmar က မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ကောက်ယူထားသောစာရင်းများအရ စစ်ကောင်စီတပ်က နေအိမ်မီးရှို့မှု အများဆုံးကို စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲတွင်ပြုလုပ်ထားပြီး နေအိမ် ၄၄၂၆ လုံး ပျက်စီးခဲ့ကာ မကွေးတွင် ၁၁၄၈လုံး၊ ချင်း ၁၁၂၁လုံး၊ ကရင်နီတွင် ၃၅၇လုံး ဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ရေးတပ် ၆၃ ဖွဲ့၏ ကြေညာချက်တွင် " ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု အဓိကသံသယရှိသူများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွင် လက်နက်ချအညံ့ခံပေးပြီး မျှတသောတရားစီရင်မှု အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါသည်။" ဟု တောင်းဆိုထားသည်။
NUG အတွင်းဝန် ဦးနိုင်ထူးအောင်ကတော့ " ဒီအဖွဲ့က အန်ယူဂျီထဲဝင်ချင်တယ်ဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အန်ယူဂျီရဲ Command (အမိန့်နာခံမှု) အောက်တော့ မရောက်သေးဘူး။"
" MOD ရဲ့ Command အောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ထွက်ပြီးသားဆို စစ်ခုံရုံးတင်ပြီးစစ်လို့ရတယ်။ အဲဒီနံပါတ်မထွက်သေးခင်မှာ လျှောက်ထားစဲပဲရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကို ဘာမှထုတ်မပေးနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တော့ အရပ်ဘက်တရားစီရင်ရေးနဲ့ စီရင်ရမယ့်သဘောပဲ။"
" ခက်တာက တရားရုံးကတော့ မရှိသေးဘူးပေါ့နော်၊ လောလောဆယ်မှာက ကျနော်တို့။ ဒါပေမဲ့ Transitional justice ဘာညာမှာတော့ ဒီဟာက လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်သဘောပဲ။" ဟု ပြောသည်။
အသတ်ခံရသော လူငယ်တစ်ဦး၏ အဒေါ်ဖြစ်သူကတော့ ယခုထက်ထိသူ၏တူ အသတ်ခံရသည်ဆိုခြင်းကို ခြေခြေမြစ်မြစ်မသိသေးပါ။
“ ကျွန်မတို့ကတော့ ကလေးတွေရှိရင်လည်း ရှိသေးတယ်။ ရှင်းခံရတယ်ဆိုရင်လည်း ရှင်းခံရပြီဆိုတာကိုအတည်ပြုပေးစေချင်တယ်။ ဓလေ့အရလုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေလုပ်လို့ရအောင်။ နောက်တစ်ချက်က ဒီရွာသားတွေနဲ့ ကျွန်မတို့ကလေးတွေကို CDM မလုပ်တာနဲ့တင် သတ်လိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ မကျေနပ်ဘူး။ စုံစမ်းပြီး ဗိုလ်သံမဏိတို့အဖွဲ့ကသတ်တာဆိုရင်သူတို့ကို ထိုက်သင့်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူတာမျိုးတွေလုပ်စေချင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
Interview with Col Naw Bu of KIO/KIA on MAL's invi...
ယင်းမာပင် လူသတ်မှုကြီးနောက်ကွယ် (မွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ...